नेपालमै आइफोन किन्ने हो ? त्यसो भए तयार पार्नुस् कम्तिमा लाख रुपैयाँको बिटो, हेर्नुस् मूल्य सूची - Technology Khabar
» नेपालमै आइफोन किन्ने हो ? त्यसो भए तयार पार्नुस् कम्तिमा लाख रुपैयाँको बिटो, हेर्नुस् मूल्य सूची
Technology Khabar ३० कार्तिक २०७५, शुक्रबार
काठमाडौं । नेपाली बजारमा नयाँ आइफोन लाख रुपैयाँ भन्दा अधिक मूल्य तिरेर ग्राहकहरुले किन्नुपर्ने भएको छ ।
बजारमा बजेट आइफोन भनेर चिनिएको आइफोन एक्स आरको सबैभन्दा सस्तो मूल्य नै एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढि तोकिएको छ । अन्य भेरिएन्ट र मोडलहरुमध्ये सबैभन्दा महंगो भेरिएन्टको मूल्य २ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि रहेको छ ।
एप्पलका आइफोनहरु नेपाली बजारमा उपलब्ध भएका छन् । एप्पलले यहि सेप्टेम्बरमा विश्व बजारमा सार्वजनिक गरेको तीन वटै मोडलका नयाँ आइफोनहरु नेपाली बजारमा आएका हुन् ।
नेपाली बजारमा एप्पलका आइफोनहरु आधिकारीकरुपमा जेनेरेशन नेक्स्ट कम्यूनिकेसन्सले भित्र्याउने गरेको छ भने विभिन्न रिटेल स्टोरहरुले बिक्री गर्दै आएका छन् । नेपाली बजारमा आइफोन एक्स एस, आइफोन एक्स एस म्याक्स र बजेट आइफोन भनेर चिनिने आइफोन एक्स आर उपलब्ध भएका हुन् ।
नेपाली बजारमा मंसिरमा मात्र उपलब्ध भएको घोषणा गरिने तयारी कम्पनीले गरेपछि रिटेल कम्पनीहरुको स्टोरमा भने सो फोन उपलब्ध भईसकेको छ ।
नेपालमा आइफोन बिक्री गर्ने रिटेलर मध्येको एक ओलिज स्टोरले आफ्नो स्टोरमा नयाँ आइफोन लिस्टेड गरेको छ जहाँ तीन वटै मोडलहरु उपलब्ध छन् । ओलिज स्टोरकाअनुसार एप्पल आइफोन एक्स एस म्याक्सको ६४ जीबी, २५६ जीबी र ५१२ जीबी स्टोरेज भेरिएन्ट उपलब्ध छन् ।
त्यस्तै आइफोन एक्स एसको पनि ६४ जीबी, २५६ जीबी र ५१२ जीबी स्टोरेज भेरिएन्ट बिक्रीका लागि राखिएको छ ।
बजेट आइफोन भनेर चिनिने आइफोन एक्स आर पनि नेपाली बजारमा उपलब्ध भएको छ । सो फोनको ६४ जीबी, १२८ जीबी र २५६ जीबी लिस्टेड भएका छन् ।
कति छ नेपाली बजारमा आइफोनको मूल्य
आइफोन एक्स एस म्याक्स
आइफोन एक्स एस म्याक्स ६४ जीबी स्टोरेजको मूल्य रु १,७८,०००
आइफोन एक्स एस म्याक्स २५६ जीबी स्टोरेजको मूल्य रु २,०२०००
आइफोन एक्स एस म्याक्स ५१२ जीबी स्टोरेजको मूल्य रु २,३४,०००
आइफोन एक्स एस म्याक्स नेपाली बजारमा सिल्भर, गोल्ड, स्पेस ग्रे कलर अप्सनमा उपलब्ध हुनेछ ।
आइफोन एक्स एस
आइफोन एक्स एस ६४ जीबी स्टोरेजको मूल्य रु १,६२,०००
आइफोन एक्स एस २५६ जीबी स्टोरेजको मूल्य रु १,८६,०००
आइफोन एक्स एस ५१२ जीबी स्टोरेजको मूल्य रु २,१८,०००
आइफोन एक्स एस नेपाली बजारमा गोल्ड, सिल्भर, स्पेस ग्रे कलर अप्सनमा उपलब्ध रहेको छ ।
आइफोन एक्स आर
आइफोन एक्स आर ६४ जीबी स्टोरेजको मूल्य रु १,१९,५००
आइफोन एक्स आर १२८ जीबी स्टोरेजको मूल्य रु १,२९,५००
आइफोन एक्स आर २५६ जीबी स्टोरेजको मूल्य रु १,४५,८००
आइफोन एक्स आर भने कम्पनीले सार्वजनिक गरेको ६ वटै कलर अप्सनमा उपलब्ध रहेको छ ।
यी तीन वटै आइफोनहरु नेपाली बजारमा औपचारिकरुपमा भने नोभेम्बर २३ तारिखदेखि उपलब्ध भएको घोषणा गरिने छ ।
आइफोनको तीन वटै मोडल नेपाली बजारमा आउँदै, सस्तो आइफोन एक्सआर पनि किन्न पाईने
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७५, शुक्रबार
एप्पलको चीनमा रहेका आधिकारीक स्टोरहरु सबै खुले, फरवरीको बिक्री भने ६० प्रतिशतले घट्यो
ईटहरी प्रहरीद्धारा फेला पारेका ५२ थान मोबाइल सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता